Manatevin-daharana ny tanàna sakaizan’ny LGBT ny tanànan’i Mexico · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2015 7:41 GMT
Nanambara ny filohan'ny governemanta ao amin'ny Distrika Federalin'i Meksika — renivohitry ny firenena, Mexico — tamin'ny 23 Novambra 2015 fa sakaizan'ny fiarahamonina LGBT ny tanàna.
Nitatitra i Celia Reyna avy ao amin'ny fikambanana vaovao IzqMx fa ankoatra ny hetsika iray ampiatranoan'ny Filohan'ny Governemantan'i Mexico City, Miguel Ángel Mancera, dia misy koa ny fikasana hanaovana fankalazana any Berlin, Alemaina :
Nanamarika toy izao ny tranonkalam-baovao Animal Político raha niresaka ny fanambaran'i Mancera :
Nahitana fitomboam-panohanana mariazim-pitoviana tao Meksika tamin'ny herintaona rehefa nandidy ny Fitsarana Tampon'ny Firenena, andrim-panjakana ara-pitsarana ambony indrindra ao amin'ny firenena, fa tsy araka ny lalampanorenana ny fandrarana ny mariazin'ny samy lahy/vavy.
Fa tahaka ny ahoana moa ny haben'ny fiarahamonina LGBT ao Meksika? iray amin'ny olona nandray andraikitra amin'ny famaliana izany fanontaniana izany i Ricardo Baruch. Tao amin'ny piesy iray ho an'ny blaogy Homozapping, izay nanononany fanadihadiana maro, no nahatongavany tamin'ny fehin-teny fa tokotokony ho 3%-n'ny mponina no ao amin'io fiarahamonina io. Nanamarika ny havesa-danjan'ny fisoloantena LGBT ao amin'ny tontolo politika sy ny fanohizany amin'ny fiarovana ny zo fototra maha olona ihany koa izy :